QM oo bixisay Mushaarka ciidamada Kenya ee kusugan Soomaaliya, maxayse tahay Ujeedadu? – Puntlandtimes
NAIROBI(P-TIMES)- Dawladda Kenya ayaa heshay Malaayiin Dollar oo ay ka heshay Qaramada Midowbay, taas oo ah Mushaarka, Adeegyada iyo Kharashaadka ciidamadeeda kusugan gudaha dalka Soomaaliya, waxaana lacagtan laga soo diray magaalada New York ee xarunta Qaramada Midowbay.
Howlgalka ciidamada Kenya ee kusugan Soomaaliya ayaa qeyb ka ah midka AMISOM ee ay dhaqaalihiisa bixiyaan wadamada Shisheeye, gaar ahaana kuwa dhaqaalahoodu horumarka wanaagsan gaaray, kaas oo lamariyo Midowga Africa.
Kenya ayaa la xaqiijiyey in ay heshay aduun gaaraya 10 Malyan oo Dollar, taas oo ah iskugu jirta mushaaraadka ciidamada Kenya, kuwa dhintay Xaquuqdoodii, Shidaalka iyo Sahayda Milateri ee uga baxday ciidamada uga sugan Soomaaliya.
Qaramada Midowbay ayaa afartii biloodba mar bixisa dhaqaalaha ku baxaya ciidamada AMISOM, waxaana muuqata in dhaqaalaha ku baxaya ciidamadaas iyo kuwa ay qaataan wiilasha Soomaaliyeed ay aad u kala duwan yihiin, gaar ahaana marka ay joogto howsha qabashada dalka.
Dawladda Faderaalka Soomaaliya ee hadda xilka haysa ayaa balan qaaday horaantii 2017-kii in ay ciidamada AMISOM ku bixi doonaan 2 sano gudahood, balse ilaa hadda iska dhaaf bixitaane, ma muuqato rajo ay ku bixi doonaan 10-ka sanno ee nagu soo beegan, maadaama ay wali dagaalamayaan dhinacyada Soomaalida.
Majirto qorshe cad oo ku wajahan dibu dhiska ciidamada Xooga dalka Soomaaliyeed oo ay isku raacsan yihiin dhinacyada Soomaalida oo dhan, waxaana muuqata in hadda la galay khilaaf hor leh oo ku wajahan hanaanka ciidamada.
Qaramada midobe wa qalad magacas in loogu yeero. Ee waxa dhah daan gaalada midoobay.
In waddamo dhisan dhaqaale la siiyo weliba dhinaca Difaaca iyo weliba Qalab ciidan.
Soomaaliya oo burburtay dhinac kasta ilaa 26/01/1991 ilaa hadda in kuwo sheegta Beesha caalamka ineysan dhaqaale iyo qalab ciidan midna ku taageerin Soomaaliya bal ha is weydiiso Soomaali Maryooleey, Caqliga dhoobo la Idinka saar waa dad aan jirin, maantay Nairobi ayey hoos fadhiyaan, dushooda ayaana lagu naaxayaa. Dad baa dadkooda iyo dalkooda ku horumarsanaya!
Waa wax aad iyo aad u xanuun badan Caqliga Soomaali maryooleey, kuwa sheegta siyaasiin laakiin aan anigu u aqaanno wax magarato iyo damiir laawayaal iyo shacabka u dhegaha nugul Qabyaaladda, markii la isku daro Labadaas ayaa waxaay dhaxal siisey iney Dowlado kale ku korsadaan ilmahooda iyagoo ka fekeraya maantay iyo berri mhstaqbalka caruurtooda.
Caruurtii Soomaaliyeed dul miyey Labada nooc ee aan kor ku soo xusay.